ပုံမှန်ထက် အအိပ်နည်းသူများတွင်ကော အအိပ်များသူများတွင်ပါ နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်း မြင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိ | Page 1119 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
၃.၁၂.၂ဝ၁၆ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
လူနာတွေအတွက်ရော ဆရာဝန်တွေအတွက်ပါ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ချောင်းဆိုး မပျောက်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါတယ်။
1. ဖျားနာပြီးနောက် လေပြွန်များရောင်နေခြင်း
၂.၁၂.၂ဝ၁၆ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အက်ဆစ်ထွက်တဲ့အစားအစာများများစားရင် ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါသလား? အစားအစာတွေမှာ အက်ဆစ်ပါဝင်မှုနဲ့ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အစားအစာတွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
pH တန်ဖိုးကိုကြည့်ပြီး အက်ဆစ်လား၊ အယ်ကာလီလား၊ ကြ...